Fizahan-tany Saint Lucia: fahatongavana miverina 400K amin'ny faha-40 taonan'ny fahaleovan-tena
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia an'i Saint Lucia » Fizahan-tany Saint Lucia: fahatongavana miverina 400K amin'ny faha-40 taonan'ny fahaleovan-tena
Ny tarehimarika farany dia manondro fa i Saint Lucia dia nihoatra ny zava-bita teo aloha napetraka momba ny fahatongavan'ireo mpitsidika. Nandritra ny vanim-potoana Janoary ka hatramin'ny Desambra 2019, Saint Lucia dia nandrakitra mpitsidika mpitsidika 423,736; ny avo indrindra amin'ny tantaran'ny nosy.
Ity taona ity no nanamarihana ny fotoana voalohany nandraisan'ny toerana toerana ny marika 400,000 amin'ny fahatongavan'ireo tafajanona tao anatin'ny herintaona. Zava-bita lehibe io, satria manondro fa ny mpitsidika dia nandray mpitsidika 100,000 fanampiny tao anatin'ny sivy taona - fitomboana 38%.
Ny ankamaroan'ny fitomboana dia atolotry ny fiakaran'ny fiaramanidina an-tsena manokana any Etazonia, izay tamin'ity taona ity, dia nanakaiky ny antsasaky ny 45% ny totalin'ny fahatongavan'ireo mpitsidika - 191,000 XNUMX eo ho eo ny mpitsidika. ny Karaiba nipoitra ho tsena faharoa lehibe indrindra ao amin'ny nosy milaza 20% amin'ny totalin'ny fahatongavan'ireo mijanona, arahan'ny akaiky ny tsena UK miaraka amin'ny 19% ary Kanada miaraka amin'ny 10%. Raha atotaly, ny fahatongavan'ireo nijanona dia nihoatra ny 7% raha oharina tamin'ny taona teo aloha, izay raha ny tena izy, dia taona nahavaky firaketana.
Io fitomboan'ny fahatongavan'olona tonga io dia nitondra tombony lehibe ho an'ny indostrian'ny fizahantany, ary ny fanitarana, ny toekarena rehetra an'i Saint Lucia satria niteraka alina-fitomboan'ny torimaso, izany hoe olona maro no nijanona tao amin'ny toeram-ponenana karama, nitaky serivisy taxi ary nankafy ny toerana voajanahary, manintona ary ny sakafo nahandro izay atolotry ny nosy ary noho izany dia namorona fotoana asa bebe kokoa ho an'ny mponina eo an-toerana.
Manoloana ny fitomboana mbola tsy nisy toy izany, ny minisitry ny fizahantany Hon. Dominic Fedee dia nilaza hoe: "Tsy liana amin'ny fampitomboana isa fotsiny izahay fa ny tena zava-dehibe dia ny miantoka ny fitomboan'ny làlan'ny indostria maharitra ary manohina ny lafiny fampandrosoana ara-toekarena rehetra izay mitarika amin'ny famoronana asa sy ny fidiram-bola ho an'ny olontsika. Ny tatitra ivelany dia manondro ihany koa fa Saint Lucia manana ny iray amin'ireo taha ambony indrindra amin'ny Daily Daily (ADR) ao amin'ny faritra, mbola mitaky be ny fangatahana aminay, izay manome ny tombam-bidin'ny fidiram-bola. "
Notohizany hoe: "Tena mirehareha izahay amin'izany zava-bita izany satria mazava fa vokatry ny fitarihan'ny indostria matanjaka, ampiarahina amin'ny politika sy programa momba ny varotra voadinika tsara, izay miteraka famokarana asa ho an'ny Saint Lucians an'arivony na eo an-tampon'ny ny indostrian'ny fandraisam-bahiny na amin'ny alàlan'ny indostria mifandraika ankolaka. Ny fihoarana ny 400,000 fitsidihan'ny mpitsidika dia fomba mety hamaranana ny faneken'ny nosy ny faha-40 taonan'ny Fahaleovantena. ”
Ny fotoana voalohany nihoaran'ny firenena ny marika 300,000 dia tamin'ny 2010 raha nanoratra fijanonana 305,937 ny nosy noho ny fahatongavan'ireo tonga.